Zimbabwe to scrap platinum mine ownership rules - Worldnews.com
Washington — Zimbabwean finance minister Mthuli Ncube said on Wednesday a rule requiring local investors to control platinum mines will be scrapped and foreigners will be allowed to own 100% in a bid to revive investment.
“We are removing that indigenisation rule, which is discouraging foreign direct investment,” Ncube
"We are removing that indigenisation rule, which is discouraging foreign direct investment,"
ReutersHARARE (Reuters) — Zimbabwe’s government has a trust problem as it introduces a discounted currency in a bid to reverse chronic cash shortages that left people struggling to get hold of basic goods. Businesspeople and economists welcomed last week’s decision to abandon an unrealistic dollar peg for the country’s surrogate bond notes and electronic dollars, which were...
INTERNATIONAL – Zimbabwe expects to raise $350 million from selling shares in five state-owned telecommunications companies and a bank, as part of economic reforms being pursued by the government, Finance Minister Mthuli Ncube said in a statement. The southern African nation’s economy is experiencing a severe dollar crunch and faces more headwinds from a drought this year that...
HARARE, Feb 28 (Reuters) - The United Nations on Thursday launched an international appeal for aid for Zimbabwe following a drought that it expects to affect around a third of the population as crop yields plummet. Seasonal rains have been patchy at best, hitting the harvest of the staple maize crop and deepening an economic crisis marked by an acute dollar crunch that has...
Russian State-controlled miner Alrosa will assess the quality of Zimbabwe's diamond reserves over the next six months but would only start mining if it can take a majority stake in such a project, the company's chief executive said on Monday. Zimbabwe is seeking to attract investment and has scrapped legislation that restricts foreign participation for some commodities. It has...